Xildhibaan Mahad Salaad oo ka hadlay shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka dhaca Teendhada Afisyooni. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xildhibaan Mahad Salaad oo ka hadlay shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada...
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka hadlay shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka dhaca Teendhada Afisyooni.
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharraxaad ka bixiyey shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee maalmaha soo socda ka dhacaya Teendhada Afisyooni.
Previous articleWeerar Madaafiic oo lagu Weeraray Xerada Xalane iyo Qasaare ka dhashay
Next articleGuddoomiyihii guddiga Ganacsatada Somalida ee xaafadda Islii oo geeriyooday.
Maxamed Muqtaar (Deeqoow ) oo ka mid ahaa Dhalinyardii ilaalada shacabka Markii danba ku Biiray ciidanka Badbaado qaran oo meydkiisa laga helay god qashin...
Madaxwayne ku Jubbaland oo kulan fogaan araga loo adeegsanayo la...
Mushkilada Soomaaliya iyo halka laga heysto
Qaraxii ka dhacay Saldhiga waabari oo lagu dilay Taliyihii Degmadaas...
Kusimaha Gudoomiyaha Gobolka Banaadi Cabduqaadir Maxamud Maxamed oo shir gudoomiye shirka...